Otu esi etinye Telegram na Fedora 35 - LinuxCapable
Dabere na Debian
Dabere na RHEL
CentOS 8 iyi
CentOS 9 iyi
Dabere na Ubuntu
Otu esi etinye Telegram na Fedora 35
Tọzdee, Nọvemba 4, 2021 Wednesday, November 3, 2021 by Jọshụa James
Kesaa nkuzi a
Wụnye ndabere achọrọ
Usoro 1. Wụnye Telegram na DNF
Usoro 2. Wụnye Telegram na Snap (Snapcraft)
Usoro 3. Wụnye Telegram na Flatpak
Otu esi ewebata onye ahịa Telegram
Nkuzi ndị emetụtara
telegram bụ usoro ozi ngwa ngwa dabere na igwe ojii na-ewu ewu n'efu. Telegram bụ onye ama ama maka ịnye oku vidiyo ezoro ezo na njedebe na njedebe, VoIP, nkesa faịlụ, n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Otu n'ime isi ihe nkiri Telegram, ọ bụ ihe pụrụ iche na enweghị njikọ ma ọ bụ nwee mmasị na nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter. Ngwa a bụkwa cross-platform, yana ụdị ngwa dị maka ọtụtụ sistemụ arụmọrụ maka kọmpụta na ngwaọrụ mkpanaka/mbadat.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye onye ahịa Telegram na Fedora 35.
OS akwadoro: Linux Fedora 35
Akaụntụ onye ọrụ: Akaụntụ onye ọrụ nwere sudo ma ọ bụ ohere mgbọrọgwụ.
Melite gi Fedora Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Na-agbakwunye onye ọrụ na Sudoers na Fedora.
Tupu ị gaa n'ihu na nrụnye, gbaa iwu a ka ịwụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Fedora gị.
Site na ndabara, ekwesịrị itinye nke a.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa nke ndị ọzọ RPM. Nke a bụ ụzọ akwadoro iji wụnye Telegram maka ndị ọrụ Fedora ka ị na-eji njikwa ngwugwu DNF. N'ọnụ ọnụ gị, mebie iwu ndị a ka ibubata ebe nchekwa n'efu na nke na-abụghị nke efu.
Iji mee ka ebe nchekwa efu, jiri:
https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
Iji mee ka ebe nchekwa anaghị akwụ ụgwọ:
Na-esote, mee ihe ndị a dnf tinye iwu:
sudo dnf install telegram
A na-ejikwa ọkọlọtọ emelite mmelite telegram dnf kwalite - nweta ume iwu.
Ọ bụrụ na ịchọghịzi itinye Telegram na usoro DNF, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
sudo dnf autoremove telegram
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla etinyere na mbụ na Telegram.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Fedora nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-elekọta ya site na Ubuntu; Agbanyeghị, etinyeghị ya na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Iji tinye Snap, jiri iwu a:
Ozugbo etinyere Snap, a na-atụ aro ka ị pụọ wee laghachi ọzọ ma ọ bụ malitegharịa ọrụ gị iji hụ na emelitere ụzọ snap nke ọma.
Na-esote, ụfọdụ ngwugwu na-abịa na kpochapụwo, yabụ ịkwesịrị ịmepụta symlink iji mee ka nkwado snap kpochapụwo.
Ọzọ, ịkwesịrị ịwụnye "faịlụ isi nke snap" ka ihe niile wee rụọ ọrụ nke ọma. Emeghị nke a nwere ike bute nsogbu na egwu.
Ọzọ, tinye ngwungwu Telegram site na iji snap:
telegram-desktop 3.1.11 from Telegram FZ-LLC (telegram.desktop) installed
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na etinyere Telegram nke ọma yana nọmba ụdị.
Ị ga-amaliteghachi nnọkọ gị!
Ka ilele akara ngosi Telegram, ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Mara, ọ bụrụ na akara ngosi Telegram gị adịghị efu, leghara nke a anya Malitegharịa ekwentị.
Ngwunye Snap dị ịrịba ama karịa karịa ebe nchekwa ọdịnala site na njikwa ngwugwu DNF maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Otú ọ dị, ngwungwu a na-echekwa ahịa n'ụzọ kwụ ọtọ karịa nke a na-emelite na ụdị kachasị ọhụrụ dị.
Maka ọdịnihu, ka imelite yana yana ngwungwu ọ bụla Snap arụnyere, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ịchọghị itinye Telegram, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Site na ndabara, etinyere Flatpak na Fedora 35 ọ gwụla ma i wepụrụ ya. Nke a bụ nhọrọ ọzọ na-ewu ewu nke yiri Snap mana ọ ga-amasị ya ebe ọ na-abịa na nke ala.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ewepụla Flatpak, tinyegharịa ya na ndabere ya.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Fedora jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Ugbu a tinye Telegram site na iji iwu flatpak:
Ụdị Y, pịa pịa Tinye igodo ịga n'ihu na nwụnye.
ICON na-efu? Malitegharịa nnọkọ gị!
Mgbe ụfọdụ, akara ngosi Telegram enweghị ike ịpụta. Ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esonụ.
Flatpack na-ejikwa mmelite na-akpaghị aka mgbe ọ bụla ịbanye na sistemụ gị mgbe ihe dị ka nkeji 10 gachara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka kwalite, jiri iwu na-esonụ.
Iji wepu ụdị Flatpack nke Telegram, mee iwu a:
flatpak uninstall --delete-data org.telegram.desktop
Pịnye Y na mgbe ahụ Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke Telegram site na iji usoro Flatpak.
Ugbu a ị nwere onye ahịa Telegram arụnyere, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ abụọ.
N'ụdị njedebe gị:
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite Telegram wee jiri ọdụ, ziga ya na ndabere:
N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ Flatpak ga-achọ ịmalite site na iji iwu dị n'okpuru ebe a na njedebe:
flatpak run org.telegram.desktop
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> Telegram. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo imepere Telegram, ị ga-ahụ ihuenyo ọdịda nke mbụ. Site ebe a, ị nwere ike ịbanye ma ọ bụ mepụta akaụntụ site na iji email ma ọ bụ nọmba mkpanaka gị.
Ekele, ị tinyela Telegram nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye onye ahịa Telegram gọọmentị na desktọpụ Fedora 35 gị n'ụzọ atọ dị iche iche.
N'ozuzu, Telegram nwere uru karịa ọghọm ma ọ bụrụ na ị na-achọkarị onye ahịa nkwurịta okwu nkeonwe. Ọ bụ ụkpụrụ nzuzo nke onwe-nke mbụ na-enweghị mgbasa ozi dị njọ nke ngwaahịa ya ma ọ bụ mpụga. Telegram na-enye nnukwu nchekwa iji chekwaa ma ọ bụ budata faịlụ, ọ na-enye nchekwa igwe ojii n'ihi na anyị nwere ike ịchekwa ma ọ bụ chekwaa faịlụ na igwe ojii.
Otu esi etinye Telegram na Linux Mint 20
Otu esi etinye Telegram na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Telegram na Pop!_OS 20.04
Otu esi etinye asụsụ mmemme Swift na Fedora 35
Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na Fedora 35
Otu esi etinye Steam na Fedora 35
Categories Fedora Tags Fedora 35, telegram Mail igodo
Otu esi etinye Nvidia 495.xx ọkwọ ụgbọ ala na Fedora 35
Wenezde, Nọvemba 3, 2021 10:47 nke abalị
Achọghị telegram mgbe ị na-agbalị ịwụnye dnf na ntinye ọhụrụ nke Fedora35
Zaa Seth Maynad
Tọzdee, Nọvemba 4, 2021 7:21 nke ụtụtụ
Daalụ maka ozi Seth, ị ziri ezi n'ezie. Emehiere m, ma ị ga-achọ ka ebubata RPM fusion iji tinye ya na njikwa ngwugwu DNF.
Emelitela m nkuzi a, na n'ozuzu, m ga-atụ aro iji ebe nchekwa fusion buru ụzọ jiri dnf ma ọ bụ flatpak.
Daalụ ozi 🙂
Zaa Jọshụa James
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 12:39 nke ụtụtụ
Daalụ maka azịza. Ọbụlagodi mgbe ị wụnyechara nkwụghachi ụgwọ ị nyere, telegram anaghị egosi mgbe m na-achọ ya ma ọ bụ nwaa itinye ya. Enweela m ume ọhụrụ.
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 12:52 nke ụtụtụ
Mgbe m na-agbalị ịwụnye repo efu, ana m enweta 404 na nbudata.
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 12:55 nke ụtụtụ
Ezi repo n'efu bụ: sudo dnf wụnye \_ https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E%fedora).noarch.rpm
Zaa Seth Maynard
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 6:26 nke ụtụtụ
Daalụ maka ozi ahụ, Seth.
Enwere m ntakịrị mgbagwoju anya, ị kwuru na njikọ ahụ na-enye 404? M nwalere ya ma rụọ ọrụ nke ọma na VM ule na Fedora 35 ọhụrụ wụnye site na iji nnomi na mado atụmatụ site na nkuzi.
Ị tinyela Telegram? Ọ ga-adị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị ka na-enweta 404 ahụ.
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 12:58 nke ụtụtụ
Mgbe m nwetasịrị repo a site na saịtị Fedora, enwere m ike ịwụnye Telegram-desktọpụ
Tuzdee, Nọvemba 9, 2021 6:27 nke ụtụtụ
Ọ bụ otu repo ahụ dị na nkuzi?
Amaghị m ebe ị na-esi abịa, ị na-eji njirimara copy and paste? Ọ bụrụ na ị mere ya, m na-eche na i debeghị ya nke ọma.
© 2022 Linux Ikike niile echekwabara.